Global Voices teny Malagasy » Maraoka: Rehefa manolotra Ramadany amin’ny fomba Frantsay i Sarkozy · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 26 Aogositra 2010 3:44 GMT 1	 · Mpanoratra Hisham Almiraat Nandika miora
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Frantsa, Iràka, Jordania, Koety, Maraoka, Fivavahana, Hehy, Media sy Fanoratan-gazety, Politika
Ireo mpanaraka ny mpitoraka blaogy Maraokana Ahmed, izay manoratra ao amin'ny Alash?  [Ar] (Nahoana?), dia nahafantatra ny fitiavany ny “zavakanton'ny zava-dratsy [Avy amin'ny mpandika: raha ny heviny hafa dia midika zava-betaveta ny hoe satyre] “. Tamin'ny voalohandohan'ity volana ity dia namoaka lahatsoratra mikasika ilay voalaza ho fanambarana nataon'ny Filoha Frantsay Nicolas Sarkozy  [Ar] momba ireo fepetra nifanesy mba “hamporisihana” ireo Silamo Frantsay hanaraka ny Ramadany- Fifadian-kanina  amin'ny fomba Frantsay amin'ity taona ity.
Ny Silamo Frantsay dia Frantsay alohan'ny maha Silamo azy. Noho izany, ny fomban-drazana Frantsay mikasika ny fihinanana ny mofo “croissant” sy kafe amin'ny sakafo maraina dia tsy tokony hajanona [mandritry ny volan'ny Fifadian-kanina]. Ary raha mifototra amin'ireo fatwas (didim-pinoana) napetraky ny Anjerimanontolon'i Al-Azhar  sy ny jurisprudence-n'izy ireo mikasika ireo [Silamo] vitsy an'isa, azon'ireo Silamo Frantsay mifady hanina ny manomboka ny tontolo androny amin'ny kafe sy ny croissant tahaka ny ataon'ireo vahoaka Frantsay hafa rehetra, amin'ny 8 ora maraina alohan'ny handehanana hiasa.
Nipoitra tao amin'ny CNNArabic.com mihitsy aza ilay “tantara”  [Ar]. Mitsikera i Ahmed:
Ny vondrona Ejiptiana iray, the Muslim Brotherhood  [Ar] namoaka lahatsoratra tao amin'ny vohikalany  [Ar] ary manameloka izay antsoiny hoe “famelezana ny finoana Silamo,” miantso ireo “manam-pahalalana sy mpahay lalàna Arabo sy Silamo mba hanohitra ireo fanaovana tsinontsinona ireo, ary hanenjika an'i Sarkozy amin'ny fanimbazimbany ny fahalalaham-pinoana.”
Maro ireo blaogy, ireo vohikala mpamoaka vaovao amin'ny aterineto sy ireo sehatra fiadian-kevitra no toa nandray ihany koa ny lahatsoratr'i Ahmed ho tena marina. Ohatra iray ao anatin'ny maro ny Basratouna.com  [Ar], sehatra Irakiana fiadian-kevitra amin'ny aterineto izay namoaka izao:
Amin'izao dia toa manohy ity tantara ity koa ny gazety an-tsoratra. Ny gazety Jordaniana Adustour dia namoaka lahatsoratra  [Ar] iray tao amin'ny pejy farany izay mitondra ny lohateny hoe: “Fifadian-kanina Frantsay amin'ny fomba Sarkozy.” Ny gazety Maraokana mivoaka isanandro al-Alam dia mamoaka ny tantara ao amin'ny pejy voalohany  [Ar] amin'ny lohateny hoe : “Manolotra fomba Frantsay amin'ny fifadian-kanina sy ny fivavahana mandritra ny volana masin'ny Fifadian-kanina ny Filoha Sarkozy.” Ny gazety Kaoetiana al-Dar koa dia namoaka lahatsoratra iray teo amin'ny andalana misy ny “Fahamarinana” [Ar] izay mitondra ny lohateny hoe: “Rehefa mampivoatra ny fifadian-kanina ny Filoha Sarkozy.”
Na dia niteny aza i Ahmed fa tohina tamin'ny fakana ny teniny tsy ara-dalàna sy ny fanovàna ny esony tany am-boalohany, dia niteny kosa izy fa tsy manohitra ny fahalalahana miteny. Na dia izany aza, nandefa “toro-hevitra vitsivitsy ihany” Ahmed  [Ar] ho an'ireo izay namoaka ireo vaovao sy ny fampahalalana izany tany anaty aterineto. Manoratra izy:
Sarin'ny The Fernwoodian  hitanao ao amin'ny Flickr ary nampiasàna ny Creative Commons Attribution 2.0 Generic .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2010/08/26/8434/
 Tamin'ny voalohandohan'ity volana ity dia namoaka lahatsoratra mikasika ilay voalaza ho fanambarana nataon'ny Filoha Frantsay Nicolas Sarkozy: http://alach.blafrancia.com/archives/318
 Ramadany- Fifadian-kanina: http://en.wikipedia.org/wiki/Ramadan
 Anjerimanontolon'i Al-Azhar: http://en.wikipedia.org/wiki/Al-Azhar_University
 Nipoitra tao amin'ny CNNArabic.com mihitsy aza ilay : http://arabic.cnn.com/2010/entertainment/8/15/blogs.aug15/index.html
 the Muslim Brotherhood: http://en.wikipedia.org/wiki/Muslim_Brotherhood
 namoaka lahatsoratra tao amin'ny vohikalany: http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=69410&SecID=230
 Adustour dia namoaka lahatsoratra: http://www.addustour.com/ViewTopic.aspx?ac=LocalAndGover2010�8LocalAndGover_issue1044_day19_id260450.htm
 Ny gazety Maraokana mivoaka isanandro al-Alam dia mamoaka ny tantara ao amin'ny pejy voalohany: http://www.alalam.ma/def.asp?codelangue=23&id_info=29776&date_ar=2010-8-19%2015:47:00
 Ny gazety Kaoetiana al-Dar koa dia namoaka lahatsoratra iray teo amin'ny andalana misy ny “Fahamarinana”: http://www.aldaronline.com/Dar/Detail.cfm?ArticleID=113135
 nandefa “toro-hevitra vitsivitsy ihany” Ahmed: http://alach.blafrancia.com/archives/335